I Masina Maria Reny mamy sy ny Zanany ary ny vavaka fanaontsika - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mivaona amin’ny fampianaram-pinoana kristianina ny fomba fiheveran’ireo sahy milaza fa mpanalalana antsika i Masina Maria. Io no ilay hoe “very amy katesizy”, ka soa ny handalinantsika hatrany ny finoana kely ananantsika, mba hihamatotra sy hivelarany. Inona tokoa moa no anjara toeran’i Masina Maria ao amin’ny litorijia sy ny fiainantsika? Iza marina no hany tena Mpanalalana tokana ho antsika, eo anatrehan’Andriamanitra? Ahoana ny amin’ny vavaka sasany fanaontsika katolika?
Tsy hampahatsiahy ireo anaram-panajana ilay Reny mamy voatanisain’ny Litanian’ny Virijiny masina no hatao, fa hanakatra ny anjara toerany eo amin’ny litorijia sy ny fiainantsika andavanandro, araka ireo vavaka mahazatra. Renin’Andriamanitra izy, sady Renintsika. Voatonona matetika ny anarany amin’ny vavaka fanaontsika. Tsy mivavaka amin’i Masina Maria sy ireo olomasina velively anefa ny kristianina, fa miangavy azy ireo avao mba hitalaho ho antsika, tahaka izay lazaina amin’ireo namana sy tapaka hoe: “Mivavaha ho anay e”. Ao amin’ny vavaka fifonana, Fiampangan-tena, dia iangaviana izy: “Koa mihanta amin’i Masina Maria Virjiny mandrakizay aho,... mba hivavaka ho ahy amin’ny Tompo Andriamanintsika”. Moa tsy manamafy izay fanaontsika ao amin’ny Rozery sy Sapile ve izany? Hoy manko isika: “Masina Maria Renin’Andriamanitra, mivavaha ho anay mpanota, ankehitriny ary amin’ny andro hahafatesanay”. Fitokisana ny vavak’ilay Reny mamy no itenenantsika aminy matetika.
Hoy ny Fiekem-pinoana: “naka Nofo tamin’i Maria Virijiny” i Jesoa ka tonga olombelona toa antsika. Ireo vavaka Fisaorana dia mahatsiahy an’i Masina Maria Virijiny Renin’Andriamanitra, eo amin’ny fotoana ahatsiarovana ny velona sy ny maty, mandritra ny Ranombavaka eokaristika, fa ao no tsiahivina ireo olomasina rehetra, razantsika amin’ny finoana. Misy koa ireo Sorona Masina manokana, fankalazana sy fahatsiarovana an’i Masina Maria Virijiny, izay mirakitra fampianarana lalina tokoa. Matetika, ny hira farany, fanirahana dia hira fanajana an’i Masina Maria, fa miaraka aminy no amitantsika ny irak’i Jesoa mpitantana ny diantsika.
Tsy misaraka amin’ny vavaka andavanandro
Lehibe ny anjara toeran’i Maria ao amin’ny fombam-pivavahana, mainka moa fa amin’ny vavaka andavanandro. Ny fomba andraisana ireo vavaka sy tonon-kira mikasika azy no toa zary olana. Maro manko ny teny an’ohatra, sarin-teny, fomba filaza iombonana eran-tany na tena malagasy, no tsy dia mazava amin’izay tsy nanao “misitagozia” (katesizy momba ny misitery), hany ka very lalana na mivaona eo amin’ny fomba fandraisana hevi-teny. Ho raisintsika, ohatra, ny hira hoe “Maria o, henoy ny feo, miantso anao any an-koatra”. Ao, tsy hoe i Maria no mamonjy ireo fanahy mijaly, fa i Jesoa no hany afaka manao izany. Saingy afaka mitondra ny fiangaviantsika i Masina Maria: toy ny mpitondra vonjy, mpitalaho mahatoky. Mivavaka miaraka amintsika ho an’ireo havantsika efa nodimandry tokoa izy. Eny, “tompovavin’ny Malagasy” i Masina Maria, sady ilazantsika hoe: “mamindra fo aminay zanakao”, satria mangoraka antsika mpanota izy. Saingy ny Zanany no hany afaka manala ny otantsika. Aoka àry samy hiezaka hanakatra ny hevitr’ireo sarin-teny sy fomba filaza samihafa fanao amin’ny vavaka ireo isika, sao mivaona fandray hevitra, ka hanaonao foana, hitsikera ny hira na vavaka efa nankatoavin’ireo manam-pahefana apositolika tany aloha, izay nahalala sy nahatakatra tsara ny hevitra fonosiny, nankato ny hampiasana azy, sy nandrakitra azy amin’ireo boky fihirana tranainy mbola voatahiry.
(…) Azonao vakiana ao Lakroa lah. 3869 daty 25 mey 2014 jifainao eny amin’ny mpaninjara ny tohiny